U maamulida danta guud.
Dhibaatada caafimaadka bulshada ee COVID-19 waxay si aad ah uga sii dartay sinnaan la’aanta dhaqaale iyo bulsho ee Portland, laakiin waxay sidoo kale na tustay qiimaha is-abaabulka iyo iskaashiga labada dhinac.
Muhimada danta guud weligeed lama garan hada kahor. Taasi waa sababta aan u wado Wadajirka Guud, Ololaha Wadajirka ah ee lagu dhisayo isku raacsanaanta arrimaha na wada saameeya.
Balanqaadka Dimoqoraadiyada Tooska
“Ololahaygu wuxuu doonayaa inaan udhigo xaafadaha, goobaha shaqada, iyo bulshooyinka dhaqanka go’aanada siyaasadeed ee magaalada. Haddii la i doorto, waxaan u isticmaali doonaa awoodda xafiiskeyga inaan ku kordhiyo fursadaha iyo boosaska dadka degmada deggen ay iskood isu abaabulaan. Waxaan sidoo kale ka shaqeyn doonaa sidii meesha looga saari lahaa caqabadaha hortaagan dimuqraadiyadda tooska ah, si dadka dhibaatada ugu badan ay u saameeyaan ay yihiin kuwa la yimaada oo gacan ka geysta hirgelinta xalka.”